I-Electrik-Trike Yasezidolophini Zombini zinobuhlobo kokusingqongileyo kwaye zinobuchule, i-LECOMOTION E-trike yitikethi encedisa ngombane eyayiphefumlelwe ziinqwelo zokuthenga ezinendawo yokuhlala. I-ECOMOTION E-trikes yenzelwe ukusebenza njengenxalenye yenkqubo yokwabelana ngebhayisekile edolophini. Uyilelwe nokuhlala ngaphakathi komnye nomnye kumgca wokugcinwa kwecwecwe kunye nokwenza lula ukuqokelela kunye nokuhambisa ezininzi ngexesha elinye ngesango elibuyayo ngasemva kunye neseti yokhuni olushenxiswayo. Uncedo lokuhambahamba luyabonelelwa. Ungayisebenzisa njengebhayisekile eqhelekileyo, kunye okanye ngaphandle kwebhetri yokuxhasa. Ukuhambisa impahla nako kuvumela ukuhambisa abantwana aba-2 okanye umntu omnye umntu omkhulu.
Itheyibhile Ipeyinti yitafile esebenzayo yomntu wonke, inokuba yitafile eqhelekileyo, itafile yomzobo, okanye isixhobo somculo. Ungasebenzisa iintlobo ezahlukileyo zemibala ukupeyinta kumphezulu wetafile ukwenza umculo kunye nabahlobo bakho okanye iintsapho, kwaye umphezulu uya kugqithisa umzobo ukuze ube nomculo weenzwa zemibala. Zimbini iindlela zokuzoba, umzobo wokuyila kunye nomzobo wenqaku lomculo, abantwana banokuzoba nantoni na abayifunayo ukwenza umculo ongacwangciswanga okanye basebenzise umthetho esiliqulunayo ukugcwalisa umbala kwindawo ethile yokwenza isingqengqelo se-nursery.
Conspiracy - Sandal shaped jewels- Izihlangu Ezihotayo Saturday 25 September
HandiShred Iphepha Shredder Friday 24 September
Gamsei I-Cocktail Bar Thursday 23 September
I-Electrik-Trike Yasezidolophini Iphepha Shredder Itheyibhile Ukuncokola Ngaphandle Kwesandla Itafile, Ukuxabana, Iplinth Into Yokudlala